आज बैशाख ३० गते आइतबारको तपाईको राशिफल | Tapaiko Khabar
आज बैशाख ३० गते आइतबारको तपाईको राशिफल
तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७५ जीवन शैली-यौन जिज्ञासा
लाभको अवसर मिले पनि तत्काल फाइदा लिँदा भविष्यको नाफा गुम्न सक्छ। मिहिनेतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन्। काम सम्पादन भए पनि तत्काल आम्दानीको आशा नराख्नुहोला। विश्वासपात्रले अन्त्यमा धोका दिन सक्छन्। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा दुस्ख पाइनेछ। पछि फाइदा हुने काम भने प्रारम्भ गर्न सकिनेछ।
परिस्थितिवश फाइदा नहुने काममा अलमलिनुपर्ला। श्रम परे पनि सोचेको मूल्य प्राप्त नहुन सक्छ। आफ्ना कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि उपलब्धिका लागि समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ला। अरूको मुख ताक्ने बानीले पनि आफ्नो काम अधुरो रहनेछ। नयाँ काममा शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर अघि बढ्नुहोला।
व्याहारिक समस्याले योजना स्थगन हुने देखिन्छ। मिहिनेतको नतिजा चित्तबुझ्दो नआउन सक्छ। कामको चाप बढ्नेछ भने स्वास्थ्यले त्यति साथ नदिने समय छ। अप्ठ्यारा परिस्थिति सुल्झाउन केही समय जुट्नुपर्ला। लक्ष्यअनुसार काममा जुट्न नसकिएला। सहयोगीहरू पछि हट्नाले नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न समस्या पर्नेछ। फाइदाका लागि समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ला।
यस भन्दा अगाडीसन्दिपको टिमलाई हराउँदै बैंग्लोरको शानदार जित
यस पछिभिरबाट बस खस्दा ५ को मृत्यु २० घाईते
थाहापाउनु, यौनसम्पर्कपछि यसरी हिँड्छन् महिला
‘उपरखुट्टी’ लगाएर बस्नु यसकारण घातक हुनसक्छ
के तपाईमा हस्तमैथुन गर्ने बानी छ ? सावधान ! यस्तो खतरा निम्त्याउँछ
ब्रत बसेको दिन सेक्स गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? यस्तो भन्छ धर्मशास्त्र